नियन्त्रणबाहिर भाइरल प्रकोप : मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुग्यो – Vision Khabar
नियन्त्रणबाहिर भाइरल प्रकोप : मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुग्यो
। २७ पुष २०७४, बिहीबार ०८:४३ मा प्रकाशित
जाजरकोट । दुई साता यतादेखि जाजरकोटका विभिन्न गाउँमा फैलिएको भाइरल ज्वरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको हो। भाइरल ज्वरोबाट मंगलबार र बुधबार थप दुई जनाको ज्यान गएको छ।
भाइरल प्रभावित क्षेत्रमा उपचारमा खटिएका डा. पवन शाक्यका अनुसार मंगलबार बिहान जुनीचाँदे गाउँपालिका ३ रावलगाउँका ५४ वर्षीय लालबहादुर भण्डारीको ज्यान गएको छ। त्यस्तै, जुनीचाँदे ५ टिप्ककी ६५ वर्षीया कालु तिरुवाको पनि ज्यान गएको छ।
स्वास्थ्य शिविरमा राम्रो उपचार नपाएपछि भण्डारी निजी मेडिकलमा गएका थिए। त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि झारफुकतिर लागेका थिए।गोठमा बस्दै आएकी कालु केही दिनदेखि चिसोले थलिएकी थिइन्। उनलाई रुघाखोकी र ज्वरो आएको थियो। समयमा उपचार नपाएपछि उनको मृत्यु भएको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले बताए।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म मृत्यु हुनेमा पाँच वर्षमुनिका सात बालबालिका र ५० वर्ष माथिका ६ जना छन्। जुनीचाँदे २ मजकोटबाट सुरु भएको भाइरल प्रकोप वडा नं १, ३, ४ को कोर्ताङ, वडा नं ५ गर्खाकोट र वडा नं १० सम्म फैलिएको छ। शनिबारदेखि भाइरल पीडितको शिविर खडा गरी उपचार गरिएको छ। शिविरमा १२ सय जनाको उपचार गरिएको छ। उपचार थालिए पनि बिरामी अझै नघटेको उपचारमा संलग्न डा. शाक्यले जानकारी दिए।
दिनदिनै बिरामी बढ्दै छन्, धेरैजसो बालबालिका बिरामी छन्। कुपोषित बालबालिकाका, वृद्धवृद्धा र कमजोर आर्थिक अवस्थाकाहरू बढी प्रभावित छन् उनले भने। औषधि नियमित नखाने, बच्चाले औषधि खान मान्दैन भनेर नखुवाउने, धामीझाँक्रीकै भर पर्ने, न्यानो कपडा नलगाउनेजस्ता कारणले प्रभावित बढी रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। शिविरमा आएकै बिरामीले नियमित औषधि सेवन नगर्दा चार जनाको मृत्यु भएको चिकित्सकले बताएका छन्।
उपचारमा आएका ९५ प्रतिशत सामान्य खालका रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी भए पनि पाँच प्रतिशतचाहिँ कडा र सिकिस्त बिरामी रहेको शाक्यले जानकारी दिए। भाइरल प्रभावित गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गर्खाकोटबाट परिचालित चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले रोग नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि मंगलबार जिल्ला अस्पतालबाट थप चिकित्सक र औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका मेडिकल अधिकृत डा.भूपेन्द्रप्रकाश मल्लसहित चार जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा गएको छ।
नेपाली सेनाको टोली प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनका साथै सोमबार केही बिरामीको उपचार गरी मंगलबार फर्किएको छ भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमै छ।
डा.शाक्यले भाइरल प्रभावितको संख्या बढ्दै गएकाले जिल्ला अस्पतालबाट थप औषधि र चिकित्सकको टोली मगाइएको बताए। निमोनियाविरुद्धको खोप अभावमा सोमबार ३६ दिने शिशुको ज्यान गएपछि थप औषधि मगाइएको छ। भाइरल ज्वरो बढेपछि एचवान्एनवान् अर्थात् कडा खालको मौसमी रुघाखोकी सिजनल फ्लुको आशंका गरिएको छ। एचवान्एनवान् भए धेरै ठाउँमा फैलिने खतरा रहन्छ। तत्काल रोग पत्ता लगाई नियन्त्रणमा नलिए महामारीकै खतरा हुने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्।
उपचारमा संलग्न मेडिकल अधिकृत डा.पवन शाक्य बिरामीको लक्षण हेर्दा एचवान्एनवान्को आशंका गरिए पनि यसै भन्न नसकिने बताउँछन्। रोग पहिचानका लागि बिरामीको रगत तथा खकार र मृतकको रगतका नमुना संकलन गरी बुधबार टेकुस्थित प्रयोगशालामा पठाइएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपालीले जानकारी दिए।
पहिलेको तुलनामा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको र एक गाउँबाट अर्को गाउँमा रोग फैलिँदै गएकाले नियन्त्रणबाहिर जान थालेको नेपालीले बताए। उनका अनुसार बुधबारदेखि ६ वटा टोलीले उपचार थालेका छन्। धेरै बालबालिका बिरामी भएकाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी बालरोग विशेषज्ञ डा.नम्रता नेतृत्वको टोली बुधबार प्रभावित क्षेत्रतर्फ खटाइएको छ। औषधि अभाव हुन नदिन सुवानाउलीमा औषधिको ‘बफर स्टक राख्ने तयारी भएको उनले बताए।
जिल्ला स्वास्थ्य मातहतका स्वास्थ्यकर्मीको बिदा र काज रद्द गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी अभाव भए पनि सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। भौगोलिक रूपमा विकट एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। दुई÷तीन वटा टोलीलाई सबै ठाउँ पुग्नै हम्मेहम्मे भएको छ। औषधि तथा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा रोग नियन्त्रणमा आउन नसकेको डा. शाक्यले बताए।
यसैबीच, बुधबार बसेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले तत्काल प्रकोप नियन्त्रणमा लिन उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।चिकित्सकको नेतृत्वमा वडा नं २ को भैरव मावि मजकोट, वडा नं ३ को आदर्श मावि लुहादह र वडा नं १० को दुर्गापुजन प्राविमा शिविर सञ्चालन गर्ने र अर्को एक टोलीलाई घुम्ती टोलीका रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए। चार वर्षमुनिका बालबालिकालाई न्यानो कपडा र थर्मसको व्यवस्था गर्न गैरसरकारी संस्थालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको शाहीले बताए।